नेपाली पहिचान बोकेको लोकल सेकुवा रेस्टुरेन्टमा विशेष परिकारहरु - Kamana News
नेपाली पहिचान बोकेको लोकल सेकुवा रेस्टुरेन्टमा विशेष परिकारहरु
तत्कालै खुलेको लोकल सेकुवा रेस्टुरेन्टमा ग्राहकको आगमन आर्कषक देखिएको छ । कोभिडकोबीच (मङसिर २६ गते) खुलेपनि रेष्टिुरेन्टका सेवा सुविधा र लुक्सको कारण ग्राहकको मन तानिएको हो । वानेश्वरमा अवस्थित रहेको सोही रेस्टुरेन्टमा रेस्टुरेन्ट सजावटका साथै उचित स्वास्थ्य मापदण्डलाई समेत प्रभावकारी रुपमा ध्यान दिईएको छ । रेस्टुरेन्टका प्रबन्धक रमेश आचार्यले आफुहरुले कोभिड १९ को मापदण्ड पूरा गर्दै सञ्चालन गरेको बताए । उनले भने ‘ग्राहकको स्वास्थ्य र सन्तुष्टि नै हाम्रो विकासको आधार हो, त्यसैले हामी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको लागि कत्ति लोभ गरेका छैनाँै ।’
प्रबन्धक आचार्यले उपत्यकाका सबै ग्राहक राम्रो र विभिन्न प्रकारको खानेकुराको लागि ठमेल नै पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन पनि आफुहरुले बानेश्वरमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको बताए । रेस्टुरेण्टमा हप्तामा २ दिन विशेष लाईभ कार्यक्रम हुने गरेको छ । व्यस्त जीवनशैलीलाई आनन्दमय तुल्याउने गरी शान्त र हरियाली वातावरणमा पारिवारिक तथा साथिसर्कलमा बसेर म्यूजिक सुन्दै विभिन्न परिकारको नेपाली लोकल खानेकुराको स्वाद लिन सकिन्छ । रेष्टुरेन्टमा दुई सय पचाँस जनासम्म अट्ने ठाउँ छ । साना केटाकेटी, युवा, परिपक्क मानिससमेतलाई उपयुक्त हुने किसिमको वातावरणछ । रेष्टुरेन्ट बिहान ८ बजेदेखी साझ ९ बजेसम्म खुल्ने गरेको छ । यस रेस्टुरेण्टमा ब्रेकफास्ट, लन्च, स्नेक्स, डिनार लगायत सम्पूर्ण खानेकुराहरु पाइन्छ । नेपालमा यो ब्रान्ड पहिलो पटक खुलेको हो ।
रेष्टुरेन्टमा २० जना सेफ रहेका छन् । रेस्टुरेन्टको विशेषता भनेको थकाली खाना र सेकुवा रहेको हो । हरियाली थिम रहेको यस ठाउँको विशेषगरी टिनेजर्स र पारिवारहरुलाई लक्षित गरिएको आचार्यले बताए ।
रेष्टुरेन्ट दुई फलरमा रहेको छ । एक सेट सोफामा ६ जना बस्न मिल्छ । सेकुवाको भान्सामा कसरी काम भईरहेको छ भनेर पारदर्शिता दिन बाहिरैबाट हेर्न सकिन्छ । साथै रेष्टुरेन्टले यहाँ आएका कस्टमर्सको तस्विर पनि खिचेर पेजमा राख्ने साथै फिडब्याक समेत लिने गरेको छ ।
नेपाली बजारमा पनि धेरै बिदेशी खानेकुरालाई प्राथमिकता दिने रेस्टुरेन्टहरु रहेपनि नेपालीको पहिचान नेपाली खानाबाटै झल्काउने रेष्टुरेन्टको प्राथमिकता रहेको आर्चायले बताए । यस रेस्टुरेन्टको विशेष फुड आईटम भनेको सेकुवा , थकाली खाना हो भने अब पिजा पनि छिटै ल्याउन तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
साझको समयमा यहाँको लाईटिङ्ग, वाह ! छुटै आनान्द......
सजावटको सुन्दरता कति मोहक ! अधेरी रातलाई चम्काएको त्यो सजावटमा ग्राहकको मोह....फोटा खिच्नकै लागि भएपनि उपस्थित त्यो जमात कुनै सभामा भन्दा कम छैन ।
रेस्टुरेन्ट पूरानो बानेश्वरबाट सिनामंगल जाने बाटोमा ५० मिटर अगाडी दायाँतर्फ रहेको छ । साथै यहाँ प्राईस पनि उत्तिकै रिजनेबल रहेको छ ।
मंगलवार, पौष २८ २०७७१२:३८:३१